02 January, 2019 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Qoraalo ay Xildhibaanadan baraha bulshada ku baahiyeen iyo Wareysiyo ay siiyeen qaar kamid ah Warbaahinta ayey ku sheegeen go’aanka dowlada dalka uga eriday Danjire Nicholas Haysom uu aha mid lagu fududaaday.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in si deg deg ah lagu soo saaray qoraalka dowlada dalka uga eriday Wakiilka Qaramada Midoobay, waxa uuna xusay in aysan dowladu ka baaraan dagin saameynta ay tilaabadan keeni karto.
Waxa uu sheegay Xildhibaan Fiqi Warqadda wasaaradda arrimaha dibaddu ay qortay ay aheyd mid ka arradan luqadda diplomaasiyadda ee adduunku wax isugu qoro ,waxa uuna sheegay in deg deg iyo sal fudeed lagu qoray.
Halkan ka Akhriso Qoraal uu Xildhibaan Fiqi oo saaray
Awoodda Ergaygu waa mid ku tiirsan xoogga ciddii soo dirsatay, awoodda ninka wax eryayna waa mid ku tiirsan awoodda kan la eryay!,waxaan hubaa degdegta lagu soo saaray, waqtiga la soo saaray iyo saamaynta ay dalka ku keeni karto intaba warqaddaas inaan si qoto-dheer looga baaraan-degin.
Kalimadaha "Wadaniyad iyo madaxbanaani” oo asal ahaan ah kalimado wanaagsan waxaa laga dhigay shaati la gashado marka dad la siraayo ama kuwa kale la xumaynaayo, waxaana laga bixiyey xuduudoodii lagu aqoon jirey.
Qodob dastuuri ama sharci kale oo caalami ah oo loo cuskaday warqaddaas dalka looga eryay wakiilka Xoghayaha Guud ee qaramada midoobay ma jirin, kalimadda ugu cuslayd ee la adeegsadayna waxey ahayd "Madaxbanaanida dalka”, ayadoo la wada ogsoon yahay in mas’uulkaasi uu sheegay oo kaliya "Dilal loo geystay dad Soomaaliyeed, kuwo la xiray iyo Musharax la soo afduubtay oo intuba ka dhacay magaalada Baydhabo” kuliigoodna dhab ah.
Dadkaada ha dilin, sharci darro ha ku xirin, Isla markaana musharixiin tartamaysa ha u kala hiilin marka laguu soo jeediyo haddii ay noqonayso "in madaxbanaanidii dalka la faragaliyey” waxa jira cudur la yiraahdo "Kali-talisnimo” oo ay u daran tahay in dhagihiisu ay maqlaan: aragti ka duwan tiisa, xorriyatul qawl, rabitaanka dadweynaha, dimuqraadiyad…iwm.
"Haddii ay dhab tahay in madaxbanaani daleed la ilaalinayo, todobaadkaan gudihiisa waxaa warbaahinta Soomaaliyeed ay soo bandhigayeen askar itoobiyaan ah oo xuduuda ka soo gudubtay kuwaas oo la qabtay ayagoo ka qeybqaadanayey dagaalo beelo Soomaaliyeed dhexmarayey, ma aanan maqal illaa iyo hadda cid dawladda madaxbaanida ka tirsan oo ka hadashay dhacdadaas xadgudubka ah” laakin qoraalkii Nicholas Haysom 24 saac ka yar ayaa jawaabo kala duwan looga bixiyey.
Warqadda wasaaradda arrimaha dibaddu ay qortay waxey aheyd mid ka arradan luqadda diplomaasiyadda ee adduunku wax isugu qoro, degdeg iyo fudeyd ayaa ka muuqatay, sanadka cusubna wuxuu u eg yahay mid saanqaad qaldan ku bilowday.
Ugu danbeyn wuxuu mudan yahay in la cambaareeyo weerarkii lagu beegsaday xafiiska qaramada midoobey ee UNSOM shalay, waxaana soo jeedinayaa in baaritaan Madax banaan la baaro weerarkaas iyo waxyaalaha la xiriira.
Booliska oo ka hadlay qarixii Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho
Akhriso:-Maxaa looga hadlayaa Kulanka Maanta ee Golaha Shacabka?
Axmed Madoobe iyo Francisco Madeira oo ka wada hadlay la-dagaalanka Al-Shabaab
Akhriso:-Wararkii u dambeeyay wasiiro iyo Xildhibaano lagu xanibay Garoonka Diyaaradaha Nairobi
Madaxa AMISOM iyo Wasiirka Gaashaandhigga oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah Shabaab
Wafdi ka socda Dowlada Turkiga oo gaaray Hargaysa.
Madaxweyne Denni oo ka hadlay fashilka Shirkii Garoowe
Xildhibaano ka tirsan labada Aqal oo walaac ka muujiyey fashilka Shirkii Garoowe
Imaaraadka iyo Norway oo ka wada hadlay arrimaha Somaliya
Madaxweyne Farmaajo iyo Amiirka Qadar oo ka wadahadlay mashaariicda ka socota
the background of the new autonomy president Visits: 669103
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 38302
Axmed Madoobe oo booqday deegaanada Baar Sanguuni iyo Buulo Gaduud Visits: 42
Laba qof oo xalay oo lagu dilay degmada Dharkeenley ee Gobolka Banaadir Visits: 19
Nin doonayay isku qarxiyo munaasabad ay lahaayeen Ahlusuna oo la qabtay Visits: 18
QM oo balan qaaday soo celinta xiriirkii kala dhaxeeyay Dowladda Somalia Visits: 30
Mareykanka oo kordhinaya Ciidamadiisa Bariga Dhexe Visits: 17